Bunndle: Inethiwekhi yokuSasazwa kwesicelo seSelfowuni | Martech Zone
NgoMgqibelo, Novemba 2, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ke uyile usetyenziso lweselula… woohoo! Ngaphandle koyilo lwe-ingenius kunye nomnikelo wexabiso, awusiboni isicelo sisuswa kwaye ulayishwe ngendlela obulindele ngayo. Bunndle ifumana ezonaapp zilungileyo kubasebenzisi abazifunayo. Injini yethu yokwenza isebenze ibonelela ngohambelwano oluphezulu lweapp kumsebenzisi, kukhokelela kumaxabiso aphakathi okufaka kufutshane ne40%.
Fikelela kubasebenzisi kwinqanaba lokuzibandakanya -Injini yokwenza uBunndle yenza kube lula ukubonelela ngesicelo esifanelekileyo kumsebenzisi wokugqibela. Sithatha umsebenzi wokuqikelela ngaphandle kwesoftware kwaye yenza kube lula kuwe ukufikelela kubasebenzisi bokwenyani abafuna ukufaka imveliso yakho. Konke ukufakwa kwinethiwekhi yethu kuvela kutrafikhi yendalo oko kuthetha ukuguqulwa okuphezulu kunye nokugcinwa kwakho.
Ukukhula kwenene. Ingeniso yokwenyani. Fumana ukufikelela kumakhulu amaqabane kunye nezigidi zabasebenzisi inyanga nganye ngokujoyina inethiwekhi yeBunndle. Yongeza iimveliso ezininzi njengoko uthanda kwaye usebenzise idatha kuyo yonke inethiwekhi ukukhulisa ukusebenza.
Ukuseta ngokulula. Akukho bunjineli buyafuneka.
Siyenzile kulula kuwe ukuqala. Ngenisa imveliso yakho, yenza umnikelo wentengiso kwaye wenze intlawulo. Yiyo leyo. Kwaye silapha ukukunceda apha endleleni ukuze ulinde ntoni? Bhalisa ngoku!
Ukuba ungumshicileli wesicelo, unokuqhuba kwakhona ingeniso eyongezelelweyo ngokudibanisa Bunndle kwisicelo sakho esiphathwayo!
tags: Ukusasazwa kweappusetyenziso lwenethiwekhibunndleusetyenziso lweselulainethiwekhi yosetyenzisosicelo se sithuthi